दिल्लीका लागि सुरुवात म्याचदेखि प्लेइङ ११ मा पर्नसक्ने ४ विदेशी खेलाडी - Everest Dainik - News from Nepal
दिल्लीका लागि सुरुवात म्याचदेखि प्लेइङ ११ मा पर्नसक्ने ४ विदेशी खेलाडी
काठमाडौंः विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को १३ औँ संस्करण १५ अप्रिलमा सारिएको छ । कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विश्व क्रिकेटका प्रतियोगिता लगातार स्थगित गरिएसँगै आइपीएल पनि १५ अप्रिलमा सारिएको हो ।
भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले आइपीएल २०२० को निर्धारित खेल तालिका २९ मार्चमा तोकेको थियो । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै बीसीसीआईले मिति सार्यो । यो पटकको आइपीएलमा पनि ८ टिमले सहभागिता जनाउँदै छन् ।
आइपीएलको नियमअनुसार एक टिमले प्लेइङ ११ मा चार मात्र विदेशी खेलाडी राख्न पाउँछ । आसन्न सिजनमा पनि सबै फ्रेन्चाइज टिमले ‘अक्सन’बाट लोकप्रिय विदेशी खेलाडी टिममा अनुबन्ध गरेका छन् । टिममा धेरै विदेशी खेलाडी हुने भएकाले सबैले प्लेइङ ११ मा मौका पाउने सम्भावना कम हुने गर्छ ।
आइपीएलको फ्रेन्चाइज टिम दिल्ली क्यापिटल्सले पनि ‘अक्सन’बाट केही स्टार खेलाडीलाई टिममा भित्र्याएको छ । यसैबीच आज आइपीएल २०२० मा दिल्लीका लागि सुरुवात म्याचदेखि नै टिमको प्लेइङ ११ मा पर्नसक्ने सम्भावित चार विदेशी खेलाडीको बारेमा चर्चा गर्दैछौंः
याे पनि पढ्नुस नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट सुरुवात, सन्दीपले लिए पहिलो ओभरमै विकेट
१. शिमरोन हेटमायरः गत सिजनमा दिल्ली क्यापिटल्समा ‘फिनिशर’को अभाव थियो । जसकारण त्यो काम पूरा गर्न दिल्लीले वेष्ट इन्डिजका विस्फोटक ब्याट्सम्यान शिमरोन हेटमायरलाई अनुबन्ध गरेको छ । हेटमायर यो पटक दिल्लीका लागि ‘फिनिशर’को भूमिका निर्वाह गर्दै टिमलाई जित दिलाउन सक्छन् । उनले गत सिजनमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी)का लागि खेल्दै आइपीएलमा डेब्यू गरेका थिए ।
सुरुवातका म्याचमा खासै प्रदर्शन गर्न नसकेका हेटमायरले अन्त्यका केही खेलमा भने आरसीबीका लागि विस्फोटक ब्याटिङ गरेका थिए । जसकारण दिल्लीले उनलाई ‘अक्सन’बाट ७ करोड ७५ लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्दै टिममा भित्र्याएको छ । महंगो मूल्यमा अनुबन्ध गरेका उनलाई दिल्लीले विदेशी कोटाबाट प्लेइङ ११ मा समावेश गर्न प्रमुख प्राथमिकता दिनेछ ।
२. मार्कस स्टोइनिसः अष्ट्रेलियाका ब्याटिङ अलराउन्डर स्टोइनिसले यो सिजनको बिग बास लिग (बीबीएल) शानदार प्रदर्शन गरे । उनले बीबीएल २०१९–२० को १७ म्याचमा ५४.२३ को औसतमा सर्बाधिक ७ सय ५ रन बनाएका थिए । जसमा स्टोइनिसले १ सय ४७ को विस्फोटक पारी पनि खेलेका थिए ।
उत्कृष्ट लयमा देखिएका उनीबाट दिल्लीले भरपोर फाइदा उठान चाहन्छ । जसकारण स्टोइनिस विदेशी चार खेलाडीमध्ये दिल्लीको धेरै म्याचको प्लेइङ ११ मा मौका पाउन सक्छन् । डिसेम्बरमा भएको अक्सनबाट उनलाई दिल्लीले ४ करोड ८० लाख भारुमा टिममा अनुबन्ध गरेको थियो ।
३. कागिसो रबाडाः दक्षिण अफ्रिकाका स्टार तिव्र गतिका बलर रबाडाले गत सिजनमा दिल्लीलाई सेमिफाइनलमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनले आइपीएल २०१९ मा दिल्लीका लागि १२ म्याचमा २५ विकेट लिएका थिए । घातक बलिङ गर्ने रबाडा दिल्लीको प्लेइङ ११ मा मौका पाउने मध्ये प्रमुख विदेशी खेलाडी हुन् । तर, पछिल्लो समय उनी चोटका कारण विश्राम गरिरहेका छन् । १५ अप्रिलसम्म पूर्णरुपमा ‘फिट’भए रबाडा सुरुवात म्याचदेखि नै प्लेइङ ११ मा मौका पाउन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस बीबीएलः पहिलो ओभरमै सन्दीपले लिए महत्वपूर्ण २ विकेट
४. सन्दीप लामिछानेः दिल्लीको घरेलु मैदान स्पिनरका लागि उपयुक्त मानिन्छ । जसमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले पनि फाइदा लिन सक्छन् । दिल्लीमा सन्दीपसहित रवीचन्द्रन आश्विन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल जस्ता स्टार स्पिनर छन् । विदेशी खेलाडीका रुपमा भने सन्दीप मात्र स्पिनर हुन् ।
लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका उनले त्यही लयलाई कायम राख्दै टिम व्यवस्थापलाई प्रभावित गर्नसके प्लेइङ ११ मा मौका पाउन सक्छन् । २०१८ को सिजनदेखि दिल्ली क्यापिटल्समा जोडिएका सन्दीपले आइपीएल २०१९ मा ६ म्याचमा ८ विकेट लिएका थिए ।
दिल्ली क्यापिटल्सको टिमः शिखर धवन, पृथ्वी शा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पन्त, इशान्त शर्मा, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, हर्षल पटेल, आवेश खान, कागिसो रबाडा, किमो पल, सन्दीप लामिछाने, अजिंक्या रहाणे, रविचन्द्रन आश्विन, शिमरोन हेटमायर, जोसन रोय, एलेक्स क्यारी, मोहित शर्मा, तुषार देशपान्डे, ललित यादव र मार्कस स्टोइनिस ।
ट्याग्स: कागिसो रबाडा, मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमायर, सन्दीप लामिछाने